जन्मदिन यसरी मनाऔं - Pahal Sanchar
ममता मानवसेवा। हामी यस्तो समाजमा बस्छौं जहाँ आफ्नै जन्मदाता वृद्ध अवस्थाका मातापितालाई वृद्ध आश्रममा लगेर राखिन्छ र पछि आफ्नै छोराछोरीहरुको जन्मदिन वृद्ध आश्रममा गएर मनाइन्छ। त्यसैपनि विदेशी संस्कृतिले गर्दा भनौं या अरुको देखासिकीले भनौं जन्मदिनमा केक काटेर बर्थ डे मनाउने चलन दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यसो गर्नाले हाम्रो संस्कृति पनि लोपोन्मुख अवस्था पुग्न थालिसकेको छ। जन्मदिन मनाउने फेशन नै बनिसकेको छ। हिजोआजका प्रायः युवा जन्मदिन भन्दै आफ्नो आमाबुवाबाट उपहार पाउने आश पनि गरिराखेका हुन्छन् र महँगो उपहारको लालच अनि पार्टी गर्ने निहुँमा विकृति उत्पन्न गराउनमा मद्दत गरिरहेका हुन्छन्।
तर मलाई यो सबै फजुल खर्च मात्रै लाग्छ। हुन त आ-आफ्नो सोचाइको कुरा हो। हामीले आफ्नो जन्मदिन मनाउनु, नमनाउनु त्यो आफूमा र आफ्नो सोच्न सक्ने क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो। किनकि हिजोआज आफ्नो जन्मदिन फजुल खर्च नगरी कुनै आश्रमहरुमा गएर त्यहाँ रहेका आमाबुवासंग जन्मदिन मनाउने र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा विपन्न परिवार र दुखी/पीडितहरुलाई सहयोग गरेर आफ्नो जन्मदिन मनाउने पनि गर्छन् । त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष पनि हो। तर मलाई लाग्छ आफ्नो जन्मदिनमा आफ्नो जन्मदाता आमाबुवासंग उपहारको आपेक्षा राख्नु एकदमै गलत कुरा हो। किनकि ९ महिना आफ्नै कोखमा राखेर आफू अनेकौं दु:ख, पीडा सहेर पनि आफ्नो सन्तान प्राप्तिको खुशीको आशमा हामीलाई जन्म दिएकी हुन्छिन् हाम्री आमा ।  त्यसपछि आमाबुवा मिलेर असल संस्कार दिँदै हुर्काउँदै,लेखाउँदै,पढाउँदै हामीलाई ठूलो मान्छे अनि असल र सक्षम बनाउनु हुन्छ हाम्रो आमाबुवा । हामी आफ्नी आमाको दूधको भार त तिर्न सक्दैनौं भने फेरि जन्मदिनमा आफ्नै आमाबुवासंग के अधिकारले उपहारको आपेक्षा राख्ने....?
अनेकौं दु:ख, पीडा त उहाँहरुले हामीलाई जन्मदिएर हुर्काउनमा पाइसक्नुभएको छ नि । फेरि कसरी हामी उहाँहरुबाट आफ्नो जन्मदिनमा उपहार लिन सक्छौं? यदि उपहार दिनु नै छ भने अब आउने आफ्नो हरेक जन्मदिनमा आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आमाबुवालाई उपहार दिने गरौँ। किनकि ती तमाम अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु सामना गर्दै हामीलाई संसारमा पाइला टेकाउनुभयो । असल संस्कार दिएर आज यति ठूलो अनि असल मान्छे बनाउनु भयो । सही के हो? गलत के हो? यो सबै छुट्याउन सक्ने सीप र ज्ञान  दिनुभयो । त्यसैले हामीहरू आफ्नो हरेक वर्षको जन्मदिनमा आफ्नो आमाबुवाको चरण छोएर आशिर्वाद लिएर आफ्नो तर्फबाट उपहार दिने गरौँ। म त मेरो जन्मदाता आमाबुवालाई आफ्नो तर्फबाट उपहार दिएर आशिर्वाद लिएर मात्रै बाँकी दिनको शुरुवात गर्छु। म यो भन्दा अगाडि आफ्नो जन्मदिन कहिल्यै मनाउने गरेकी थिएन । किनकि जब मेरो जन्मदिन आउने गर्थ्यो तब म ती तमाम अनाथ, अपांग, गरिब,  दुखी, बेसहारा र पीडितहरुको सहयोगको निम्ति थोरै पैसा उनीहरुको नाममा जम्मा गर्ने गर्थे। म आफ्नो जन्मदिन कहिल्यै मनाएकी थिएन।  तर यो वर्ष २०७७ साल मंसिर २८ गते आफ्नो जन्मदिन दाङमा रहेको मनाव कल्याण समाज (सेवा घर) मा रहनुभएका आमाबुवाहरुलाई मेरो तर्फबाट जाडोको लागि न्यानो उपहार साथै आफ्नै हातले बनाएको खाजा र खाना खुवाएर मनाएँ ।  यसरी जन्मदिन मनाएको मेरो पहिलो जन्मदिन थियो। बेसहारा वृद्ध आमाबुवा, भाइबहिनी, छोराछोरीहरुसंग पहिलोपटक जन्मदिन यसरी नै मनाएँ ।
सानैदेखि सबैभन्दा फरक सोचाइ राखेर अगाडि बढेकोले होला सायद मलाई अरुको देखासिकी गर्न कहिल्यै  मन लाग्दैन र कहिल्यै गर्दिन पनि । जन्मदिन मनाउने बेला केक काटेर र मैनबत्ती बालेर फेरि निभाएर जन्मदिन मनाउने मलाई कत्ति उचित र राम्रो लाग्दैन ।   भनिन्छ नि बालेको दियो कहिल्यै निभाउनु हुँदैन र पुजा गर्ने बेला दियो निभ्नु अशुभ मानिन्छ भने हामी त हरेक वर्ष नयाँ जीवनको शुरुवात गर्छौं ।  बालेको मैनबत्ती किन निभाउनु? जन्मदिन हो भन्दैमा किन पार्टी गरेर पैसा खर्च गर्नु ? बरु त्यही पैसा बचाएर एकछाक खाना धौधौ हुने परिवारको लागि चामल ,नुन, बेसार, दाल, कपडा लगिदिए हुँदैन र...?
हाम्रो समाजमा विस्तारे विदेशी संस्कृतिले  जरा गाड्दैछ ।  अब हामीहरु विदेशी संस्कतिको जरा  उखेलेर फाल्नु जरुरी छ। आफ्नो संस्कृतिहरुको जगेर्ना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य  हो र यसमा महत्त्वपूर्ण भुमिका युवाहरुको नै हुने भएकोले हरेक युवा यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ । जन्मदिन होस् या अन्य कुनै पर्व परापुर्वकालदेखि नै चल्दै आइरहेको चलनलाई मान्दै संस्कृतिलाई बचाउनुपर्ने हुन्छ ।  विदेशी चलनचल्तीमा रहेको देखावटीपनलाई हामीले त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी संस्कृतिको होडबाजीमा प्रायले आफ्नो  आमाबुवालाई आदार, सम्मान गर्न छोडिसकेको सुन्न अनि देख्न पाइन्छ। यो निकै नै लाजमर्दो कुरा हो। त्यसैले सोंच परिवर्तन गरौँ। जन्मदिनमा उपहार लिने होइन दिने गरौँ। हरेक राम्रो कामको शुरुवात आफैबाट र आजैदेखि गरौँ।
(लेखिका स्वास्थ्यकर्मी अहेव.तथा समाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
प्रतिगमन विरुद्ध विद्यार्थी जागरण अभियान तीब्र